Arabia Saodita: Raisina Toy Ny Gadra Rehetra ny Gadra “Tondro Molotra” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2012 8:56 GMT
Taorian'ny fihetsiketsehana kely mitsitokotoko nandrakotra ny firenena izay tsy mbola fahita hatrizay , namoaka fanambarana ny Minisiteran'ny Atitany mikasika ireo gadra tondro molotra. Teboka telo no hita amin'ny fanambarana:
Tsy maintsy mandalo ny Biraon'ny Fanadihadiana sy ny Fampanoavana sy ny Tribonaly Manokana momba ny ady heloka bevava avokoa ny gadra voampanga amin'ny asa sy heloka ataon'ny vondron'olona mpikomy, ary efa misy ny didy savaranonando sy ankapobe navoaka ho an'ny sasany raha mbola miandry ny fitsarana azy koa ny hafa.
Ny gadra rehetra, na voaheloka na mbola voarohirohy dia mizaka ny zony ara-dalàna momba ny zon'olombelona, izay azo hampiharina eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny Biraon'ny Fanadihadiana sy ny Fampanoavana, ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona ary ny Fikambanam-pirenena misahana ny Zon'olombelona.
Manan-jo hahazo vola amin'ny fandaniany amin'ny ilaina andavanandro, ikarakarana ny fahasalamana sy ny fianarana ny gadra rehetra sy ny fianakaviany.
(Tsy ara-dalàna ny teny nampiasany tamin'ny fanambarana amin'ny teny Arabo [zo] saingy mifanaraka amin'ny sharia)
Fanampin'izany, ahitana antsipirihany momba ireo “gadra” sasany ny fanambarana, izay voantonotonina taminà resaka fihetsiketsehana madinika ny anarany, anisan'izany ilay mpikatroka ny zon'olombelona Mohammad al-Bejady izay voarohirohy ho “nifandray taminà vondrona vahiny mba hitondra korontana, sy heloka hafa”.
Olàna voalohany ao Arabia Saodita ny fanagadràna tsy amin'ny antony. Tombanan'ny Fikambanan’olo-tsotra Saodiana miaro ny zon’olombelona sy ny Fikambanana miaro ny Zo Ara-pollitika fa maherin’ny 30,000 no isan’ireo gadra tsy misy antony, raha toa kosa ny governemanta nanombana azy ireo ho 4.396. Maro ireo nosamborina nandritra ny fihetsiketsehana “ady amin’ny fampihorohoroana” taorian'ny 11 septambra .
Nosokajian'ny gazety ara-dalàna ao an-toerana fa “fanambarana ny zava-misy” ny fanambarana. Hoy ny gazety Sabaq, gazety malaza amin'ny aterineto naneho hevitra :
@sabqorg: Nanambara ny zava-misy ny Minisitry ny Atitany mba hiresaka momba ireo gadra sy voatàna noho ny resaka vondrona mpikomy.
Salman al-Dosary, tonian-dahatsoratry ny gazety al-Eqtisadya, nisioka hoe:
@SalmanAldosary: Arabia Saodita irery no firenena tokana ahitana mpiaro ny zon'olombelona miaro mpanapoaka baomba sy mpanao trafikanà Oraniôma ary ny olona voarohirohy amin'ny fampihorohoroana.
Tetsy andaniny, mpisera Twitter marobe no naneho ny tsy fifaliany, anisan'izany ireo havana akaikin'ireo gadra tondro molotra. Nourah Suliman, rahavavin'iray amin'ireo gadra, nisioka hoe:
@A5tSJEEN: Manambara amin'izao tontolo izao aho fa izahay, amin'ny maha fianakavian'ny gadra anay, dia tsy nahazo vola riyal avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany. Isika ihany no mandoa ny vola lany amin'ny fivezivezena miala ao [Atsimo tanàna] Abha mankany Riydh mba hitsidika ireo gadra.
Mamazivazy momba ny heloka vitan'ireo “gadra” izay voalaza ao amin'ny fanambarana ho toy ny “manao varotra Oraniôma”, Mpikatroka Saodiana malaza Essam al-Zamel nisioka hoe:
@essamz: Mampitandrina anao izahay: Vahao ny olana momba ny tsy fananan'asa, raha tsy izany hirongatra amin'ny fivarotana Oraniôma avokoa ny tanora.
MpiseraTwitter Souhayl al-Yammi nisioka hoe:
@agrni: Saiky natoky ny fanambaran'ny Ministeran'ny Atitany aho, soa fa namaky ny anaran'i al-Bejady sy ny fanenjehana azy..
Bilaogera Saodiana malaza blogger, Fouad al-Farhan, nisioka hoe:
@alfarhan: Nanamarika tao amin'ny fanambaran'ny Minisitera ny vondrona vahiny fa al-Bejady no olona voalaza ao amin'ny fanambarana.
Bilaogera saodiana Khaled Yeslam nisioka momba ny fiteny nosoratan'i George Carline:
@kyeslam: “Manana fitsipika izay iainako aho. Fitsipika voalohany: Tsy matoky izay rehetra ambaran'ny governemanta amiko aho” – George Carlin